Joany 7 - Ny Baiboly
Joany toko 7
Ny niakaran'i Jesoa tao Jerosalema tamin'ny fetin'ny Tranolay - Ny nampianarany tao an-tempoly - Ny nitadiavan'ny loholona hisambotra azy - Ny tsy fifanarahan'ny olona hevitra ny aminy.
1Taorian'izany dia nitety an'i Galilea Jesoa fa tsy nety nankany Jodea, satria nitady hahafaty azy ny Jody. 2Nony efa akaiky ny fetin'ny Jody atao hoe fetin'ny Tranolay, 3dia hoy ny rahalahiny taminy: Mialà eto hianao, ka mankanesa any Jodea, mba ho hitan'ny mpianatrao koa ny asa ataonao; 4fa tsy misy mitady ny tenany ho fantatr'olona ka manao zavatra amin'ny takona. Raha manao izany zavatra izany hianao, dia misehoa amin'izao tontolo izao. 5Fa na dia ny rahalahiny aza tsy nino azy. 6Dia hoy Jesoa taminy: Tsy mbola tonga ny fotoako, fa ny fotoanareo no eo mandrakariva. 7Satria tsy mahay mankahala anareo izao tontolo izao, fa izaho no halany, noho izaho milaza fa ratsy ny asany. 8Mandehana miakatra mamonjy ny fety hianareo; fa izaho tsy miakatra mamonjy izany, satria tsy mbola tonga ny fotoako. 9Rahefa nilaza izany izy dia nijanona tao Galilea. 10Kanjo nony lasa ny rahalahiny, dia mba niakatra hamonjy ny fety ihany koa izy, saingy tsy nisehoseho, fa toa niafinafina.
11Koa nitady azy ny Jody tamin'ny andro fety nanao hoe: Aiza izy? 12Ary nitakoritsika azy be ihany ny vahoaka; ny sasany nanao hoe: Tsara fanahy izy; ny sasany kosa nanao hoe: Tsia, fa manoloky ny vahoaka izy. 13Nefa tsy nisy sahy niresaka azy ampahibemaso noho ny fahatahorany ny Jody.
14Nony mby teo an-tenatenan'ny fety, niakatra tao amin'ny tempoly Jesoa, ka nampianatra. 15Dia gaga ny Jody ka nanao hoe: Ahoana re no ahaizany taratasy, nefa tsy nianatra izy tsinona? 16Namaly Jesoa ka nanao taminy hoe: Tsy ahy ny fampianarako, fa an'ilay naniraka ahy. 17Ka raha misy te-hanao ny sitra-pon'Andriamanitra, dia hahalala na avy amin'Andriamanitra ny fampianarako, na miteny ho ahy aho. 18Izay miteny ho azy dia mitady ny voninahitry ny tenany; fa izay mitady ny voninahitr'ilay naniraka azy no marina, ary tsy misy fitaka ao aminy. 19Moa tsy nomen'i Moizy ny Lalàna va hianareo? nefa tsy misy aminareo mahatanteraka ny Lalàna. 20Nahoana no mitady hahafaty ahy hianareo? Dia namaly ny vahoaka ka nanao hoe: Azon'ny demony hianao; iza no mitady hahafaty anao eo?
21Fa namaly Jesoa ka nanao taminy hoe: Asa iray monja no nataoko, dia safotra hianareo rehetra. 22Nefa ny famorana nomen'i Moizy anareo (na tsy Moizy, fa ny razana no nihaviany), dia ataonareo na amin'ny sabata aza. 23Ka raha forana ny olona na dia amin'ny sabata aza, mba tsy hofoanana ny Lalàn'i Moizy, nahoana no dia tezitra amiko hianareo, raha lehilahy anankiray no mba nositraniko tamin'ny sabata ny tenany manontolo? 24Aza dia mitsara araka ny ivelany, fa mbà mitsara araka ny marina.
25Tamin'izay dia nisy mponina sasany tao Jerosalema nanao hoe: Moa tsy izy io ilay tadiavin-dry zareo hovonoina? 26Ary nahoana no miteny ampahibemaso izy io, ka no tsy misy sahy miteny azy akory? Sao dia efa fantatry ny loholona kosa fa io no Kristy? 27Ny nihavian'izy io anefa fantatsika; fa ny hihavian'ny Kristy kosa tsy misy hahalala rahefa tonga izy. 28Dia niantso àry Jesoa tao am-pampianarana tao amin'ny tempoly ka nanao hoe: Fantatrareo aho, ary fantatrareo koa izay nihaviako. Nefa tsy tonga ho ahy aho, fa marina ilay naniraka ahy, fa tsy fantatrareo. 29Izaho no mahalala azy, satria izy no nihaviako, ary izy no naniraka ahy. 30Tamin'izay dia nitady hisambotra azy ny olona, kanefa tsy nisy sahy nitana azy, satria tsy mbola tonga ny fotoany. 31Ary maro tamin'ny vahoaka no nino azy ka nanao hoe: Rahefa tonga ny Kristy, moa hanao fahagagana betsaka kokoa noho ny ataon'ity Lehilahy ity va?
32Ren'ny Farisiana ny vahoaka nitakoritsika toy izany ny aminy, ka naniraka miaramila hisambotra azy ny lohan'ny mpisorona sy ny Farisiana. 33Fa hoy Jesoa: Kely foana sisa no itoerako aminareo dia hankany amin'izay naniraka ahy aho. 34Hitady ahy hianareo, fa tsy hahita, sady tsy azonareo aleha izay itoerako. 35Dia nifampilaza hoe ny Jody: Aiza àry no halehany no tsy ho hitantsika izy? Ho any amin'izay miely any amin'ny jentily va re izy, ka hampianatra ny jentily? 36Ahoana no hevitr'ity teniny hoe: Hitady ahy hianareo fa tsy hahita, sady tsy azonareo aleha izay itoerako?
37Tamin'ny andro lehibe famaranana ny fety, dia nitsangana Jesoa ka niantso hoe: Raha misy mangetaheta, aoka izy hanatona ahy ka hisotro. 38Fa hisy onin-drano velona hiboiboika avy ao anatin'izay mino ahy, araka ny voalazan'ny Soratra Masina. 39Ny Fanahy horaisin'izay hino azy no nambarany tamin'izany; fa tsy mbola nomena ny Fanahy, satria tsy mbola niditra tamin'ny voninahiny Jesoa.
40Nony nandre ireo teny ireo ny vahoaka, ny sasany nanao hoe: Ity tokoa no ilay Mpaminany; 41ny sasany manao hoe: Ity no Kristy; fa hoy kosa ny sasany: Fa angaha avy any Galilea no ihavian'ny Kristy? 42Tsy voalazan'ny Soratra Masina va fa avy amin'ny taranak'i Davida, sy avy amin'ny tanàna Betlehema nitoeran'i Davida no hihavian'ny Kristy? 43Koa nisara-tsaina ny aminy be ihany ny vahoaka. 44Ny sasany tamin'izy ireo aza nitady hisambotra azy; saingy tsy nisy sahy nitàna azy.
45Dia niverina tany amin'ny lohan'ny mpisorona sy ny Farisiana ny miaramila, ka nilazan'ireo hoe: Ahoana no tsy nitondranareo azy? 46Fa hoy ny navalin'ny miaramila: Tsy mbola nisy olona niteny tahaka iny Lehilahy iny. 47Dia hoy ny Farisiana tamin'ireo: Hianareo koa angaha voasolokiny? 48Jereo ange raha mba misy loholona na Farisiana iray akory nino azy? 49Ary raha izay vahoaka foana tsy mahalala ny Lalàna akory, dia olona voaozona ireny. 50Dia Nikodema ilay nanatona an'i Jesoa nony alina sy anisan'izy ireo, no nanao taminy hoe: 51Moa ny Lalàntsika va manameloka olona raha tsy efa re aloha ny teniny, ka fantatra koa izay nataony? 52Fa namaly izy ireo ka nanao taminy hoe: Hianao koa ve avy any Galilea? Diniho dia ho hitanao fa tsy misy mpaminany avy any Galilea. 53Dia samy lasa nody ho any antranony avy izy ireo. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0352 seconds